Ungayiphuca kanjani ikhanda lakho ngendlela efanele? | Amadoda aSitayela
Ungayiphuca kanjani ikhanda kahle?
UManu RS | | Ukunakekelwa komuntu siqu
Lapho ezempi zikhona, eyodwa Ngifunde cishe ngenkani ukugunda izinwele zakhe kube zero ukuze kuzofanela ukuthi akhohlwe ngakho amasonto ambalwa ize ikhule. Eqinisweni, manje, uma usembuthweni wezempi, futhi kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokubukeka okuhle kakhulu ukuze ungadluli umshini njalo ngababili ngabathathu.
Kepha ukuthi kwenzeka kanjani kule mpilo kubalulekile yazi amaqhinga ahlukahlukene noma amathiphu ukuze lesi senzo sokususa izinwele ngenhla sibushelelezi futhi ngaphandle kwezinkinga ezincane. Ngamafuphi, sizokufundisa ungagunda kanjani ikhanda lakho nokuthi yini okudingeka uyenze kahle futhi ngaphandle kokubeka ikhanda lakho engcupheni.
1 Things️ Izinto zokuqala kuqala: okokusebenza okuhle kakhulu kokugunda izinwele
1.1 🛒 Amathiphu okuthenga isiqeshana sezinwele
2 📌 Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa umshini
3 👨‍🦲 Ukudlulisa umshini
4 📚 Amathiphu okushefa ikhanda lakho
Things️ Izinto zokuqala kuqala: okokusebenza okuhle kakhulu kokugunda izinwele
Kubalulekile ukuba neqembu elihle nathi elingakwazi sinikeze imiphumela emihle kakhulu. Futhi njengoba kwenzeka njalo, singafinyelela amanani ahlukene, noma iqiniso lisho ukuthi cishe ngama- € 22 singafinyelela emshinini esingasebenzelana kahle ngawo.
Singakwazi ukufinyelela i-Remington HC5030 nge- € 23 njengenketho eshibhile. Uma sivele sesiya enanini elifanele lemali sinenguqulo enkulu ngeRemington HC5810 ngo- € 47, futhi uma sesivele saya kwelinye izinga singadlula ePanasonic ER-1611 ngo- € 123.
Uma ufuna ukukhethwa kwemikhiqizo emihle kakhulu yokushefa ikhanda lakho, naka lokhu ukukhethwa komkhiqizo.
Izinwele ezinde zabesilisa
🛒 Amathiphu okuthenga isiqeshana sezinwele
Izinwele zezinwele ezingasetshenziswa zombili izinwele ezomile nezimanzi zingakwazi kubaluleke kakhulu ngezikhathi ezahlukahlukene ngakho-ke kungakuhle ukuthi ubheke kuleli phuzu
Umshini ongenazintambo izonikeza ukuguquguquka okungcono uma uyisebenzisa, ngoba intambo ingangena endleleni. Ama-euro ambalwa futhi sizovuma ukuthengwa okunje
Woza ngezesekeli ezahlukahlukene ukuze ukusika kube lula kubalulekile yize kungesona isici esiyisisekelo
Okwenziwe ngamacembe kungenye indlela ongayibheka
Futhi ukuqeda i- isisindo somshini kungakuhle ukuthi kungabi ngaphezu kokulula ukukwazi ukubhekana kangcono nakho
Eminye imininingwane okufanele icatshangwe yi- ukuthenga umsiki yezindawo ezinzima kakhulu njengezungeze izindlebe, intamo nebunzi. Ezitolo ezinkulu kunezinketho ezinhle ezingaphezudlwana kwe- € 20.
📌 Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa umshini
Ukuze konke kuhambe kahle, kufanele sinakekele kahle ukuthi umshini, uma kungowobuchwepheshe, ugcotshisiwe. Njalo ezinyangeni ezimbili noma ezimbili kubalulekile ukufaka ithonsi ukuze ama-blades abe nomphumela omuhle kakhulu.
Elinye iphuzu elibalulekile ukuthi ama-blades zihlanzeke kahle, ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthi siziqaqe ngaphambi kokuqhubeka nokusika uqobo. Ezishibhile zivame ukuba nesethi yokuhlanza ngesimo sohlobo lwamabhulashi amancane alungiselela umsebenzi kakhulu.
Mayelana namafutha, imvamisa kufayela le- imiyalo yomshini iza indlela yokuyisebenzisa futhi uma lolo hlobo lomshini luyidinga ngempela. Njengoba ngishilo, akuzona zonke ezinekhwalithi efanayo, ngakho-ke ukugcinwa kwazo kuncike ezicini ezithile. Ochwepheshe kufanele basebenzise ithonsi likawoyela.
Ngaphambi kokuya kulesi sinyathelo kufanele sibe namakhasi ahlanzeke ngokuphelele, ngakho-ke kubalulekile ukuthi siwele amshiye imizuzu embalwa kube sengathi besiyikhiphe ebhokisini layo okokuqala ngqa.
Nini sifake iconsiManje kufanele sikhanyise umshini cishe imizuzwana engama-20 ukuze ugcotshwe kahle futhi ulungele ukuqhubeka nokusika izinwele.
👨‍🦲 Ukudlulisa umshini
Uma sinezinwele ezinde kakhulu, kungakuhle ukuthi sisebenzise inombolo enkulu ukuthi kufanele senze izinto zibe lula, ngoba uma siya kakhulu empandeni kungaba nzima ukusika ngemizuzu embalwa.
Njengoba sesivele sisika zonke izindawo, sesivele siya ngqo ku-1 noma ku-3 ukusika njengoba sifisa, ngaso sonke isikhathi sinenketho yokuyibeka ku-0 ukuze ingabi nazinwele ngokuphelele.
Njenganoma yikuphi ukugunda izinwele, kunconywa ukuthi iya eyodwa kumgundi wezinwele, kodwa ngenxa yentengo ephansi yemishini ethile, namuhla umuntu angonga imali enhle kulezo zikhungo ezingaba kusuka ku- € 6 kuye ku- € 18 kuya ngendawo ohlala kuyo.
📚 Amathiphu okushefa ikhanda lakho
Esokuqala ukuthi unezinwele ezihlanzekile, noma ngabe unaso isikhathi eside noma esifushane. Hhayi kuphela ezenhlanzeko kepha ngoba ibukeka ingcono kakhulu, ngaphandle kokuthi iza kahle ngaphambi kokuyisika noma, njengakulokhu okuthunyelwe, ukuyishefa.
Kubalulekile sebenzisa igwebu lokushefa ekhanda lonke ukugwema ukucasuka noma ukulimala okungenzeka.
Kumele dlulisa insingo ngomqondo wokukhula kwezinwele. Lokhu kwenza izinwele zibe ncane kakhulu, ukuze kudlule kahle kwesibili kungabe sekuvele njengokufisa kwethu.
Uma sesivele siqonde kolunye uhlangothi, sizoba naso ukulungele ukuyigunda kahle njengoba nje sasifuna.
Lo okokuqala ingaphambili, bese izinhlangothi futhi ekugcineni singahambisa ngemuva ngosizo lothile. Lapha ukuba nesibuko sesandla kanye nesingaphambili kwenza kube lula ngathi ukuthi singamdingi noyedwa lo msebenzi. Ukubekezela okuncane ngoba ngemizuzu sizobe sesikulungele kahle.
Kubalulekile ukuba nethawula elinomswakama ukususa izinsalela zegwebu nezinwele ezisele. Ongakusho ukuthi i-post shawa ifika kahle ukugwema ukushiya indlu yangasese ngalezo zinwele ezibonakala zingapheli
Sisebenzisa a amafutha okuthambisa ekhanda ngakho-ke ayomi noma icasule.
Le nqubo sizozama ukukwenza futhi lapho sibona ukuthi iqala ukukhula kakhulu.
Ngakho konke okushiwo, uzoba namathiphu amahle kakhulu we aphuce izinwele kahle futhi masingathathi noma yikuphi ukusika noma ukulunywa okucasulayo lapho sifuna ukuphuma ngokuhamba kwesikhathi nabangane sijabulele ubusuku. Ngakho-ke ungaphuthelwa ukuqokwa ngaphambi kwezinye zalezo zeluleko esizethula kuMadoda anesitayela nokuthi sithanda kakhulu ukwabelana nokupha.
Ngabe kukhona amanye amathiphu owaziyo angaba wusizo uma kukhulunywa nge- gunda ikhanda lakho? Sitshele ukuthi wenza kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ungayiphuca kanjani ikhanda kahle?
Ngemuva kwesikhathi kodwa umbono wami uyahamba: Ngineminyaka emi-4 ngishefa ikhanda.
1. Ngikwenza njalo ezinsukwini ezimbili, uma kufanele ngaphambili, ngizophinda futhi.
2. Ngihlala ngikwenza emuva naphambili
3. Uma ngingenawo ukhilimu ngisebenzisa insipho nje
4. Angikaze ngicasuke
5. Yebo ngike ngaba nezingozi zami, kodwa zincane.
6. Kuyintokozo ukuba nempandla, nokuthi nginezinwele.
Ngiyayithanda imibono yakho nami ngenza okufanayo
Kimina futhi kuyintokozo ukuhamba nempandla ngoba ngiya nempandla
Kuyifomu efanayo ngoba ngineminyaka engama-23 kodwa ngicabanga ukuthi ngiyakuthanda ukuba nempandla
bhekisisa loquillo hug kude
Ngibe nempandla iminyaka, ngaphandle kwalokho nginezinwele eziqonde ngqo nezinhle ezenza inkinga yami ibe yimbi kakhulu, ngifuna ukugunda ngoba nginomshini, kepha ngiyangabaza, uma bengingasebenzisa u-0 noma u-1? Noma inhlanganisela? Ngineminyaka engama-24 ubudala 🙁
Ngineminyaka engu-25 futhi anginazinwele kusukela ngineminyaka engu-22 .. Yilokho engikushilo futhi ngadweba! Bengingafuni ukuthi ibe njalo kodwa-ke ngiyayithanda futhi ngiyenza ngokwejwayelekile njalo ezinsukwini ezimbili noma ezintathu njalo .. Kuwumkhuba futhi ngiyayithanda! Kukwenza uzizwe kamnandi kanjani ngawe ukunakekela isithombe! Kufanele ube ne-javi enhle !! Njalo ubuso obuhle kakhulu !! Yena yena
Ngesikhathi ungiphulula u-Oscar, ngase ngivele ngishefi u-hehe, kuyinto ehlukahlukene futhi enethezekile, ngangihlushwa inkwethu futhi ngaphandle kwezinwele konke kuhlanzekile futhi nekhanda lami selipholile sengivele ngagunda izikhathi ezimbili ngaphandle kwe "0" ne insingo Ukushefa, ukubukeka kukhululekile, iqiniso liwukuthi, ngicabanga ukuhlala kanjalo. Siyabonga ngokuphendula.
Ngishefa izinhlangothi zekhanda lami selokhu nginqume ukwenza i-mohawk, kepha inkinga yami yile elandelayo, ukusebenzisa insingo ejwayelekile (njengoGillette) kulungile noma kufanele ngisebenzise insingo kagesi? Anginankinga yokusebenzisa iGillette kepha iyinkimbinkimbi ngandlela thile futhi ihamba kancane
Angikweluleki ukuthi ngithenge umshini we-remington, ngibe nezinkinga kusukela osukwini lokuqala, ngamandla (aphansi kakhulu) kwaqhekeka nocezu olubalulekile lweplastiki (oluthambile impela). Uma uzoyisebenzisela impilo yakho yonke, sebenzisa leyo mali. Kusuka kuma-euro angama-45. UBraun udutshulwe ephephile. Umngani onempandla
Ngijwayele ukushefa ikhanda, lapho ngikwenza njalo ezinsukwini ezimbili ligeleza kangcono kakhulu, lapho ngasizathu simbe lingasebenzi futhi ngithatha izinsuku eziningi, okokuqala ngomshini wokuxebula nangemva kokushefa. MNe ngiyayithanda, ngenza kahle. Futhi, ngishefa umzimba wami wonke.
Ungamhlonza kanjani owesifazane onamanga?
Amajakhethi amahlanu okugunda amabhayisikili kulobu busika